Izay haingana indrindra Lamasinina In Eoropa sy izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > Izay haingana indrindra Lamasinina In Eoropa sy izao tontolo izao
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Portugal, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby any Soeda, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 27/09/2020)
Efa te-hitsidika Eoropa amin'ny alalan'ny zavatra Vintage, toy ny fiaran-dalamby? Ahoana no feo handeha ho any 300 kilaometatra isan'ora? Eoropa Manana tambajotra lehibe ny fiarandalamby haingam-pandeha izay hitondra anareo haingana ny toerana halehany. Fiaran-dalamby haingam-pandeha ny tolotra ihany no mijanona ao an-tanàna lehibe indrindra. Ny fiaran-dalamby manolotra aina sariety ny 1 sy 2 kilasy, ary koa ny tsara sakafo karakaraina tolotra. Ity bebe kokoa momba ny the fastest fiaran-dalamby in Europe.
The Alfa Pendular diany nanaraka ny morontsirak'i Portiogaly, avy any Braga ho any Faro, ary mijanona any Porto, Coimbra, ary Lisbon. Tsy ampy 6 ora, dia afaka tonga amin'ny lafiny iray amin'ny firenena sy hankafy toerana tena tsara tao anatiny.
Alvia Mampiofana ny any Eoropa
The Alvia, Ve ny Espaniola Lamasinina haingana indrindra any Eoropa ka hiady, dia lavitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny hatramin'ny 250 kilaometatra isan'ora. Tsy vitan'ny hoe mampifandray ny tanàna lehibe Espaina, fiaran-dàlamby ity ihany koa ny manome ankehitriny misy ao. Ireo no lehibe sasatra seza maherin'ny ampy ny toerana ho an'ny tongotra, Ary mbola hanohon latabatra, ary ny feo sy ny horonan-tsary outputs.
ICE fiarandalamby tany Eoropa hampifandray tanàn-dehibe rehetra tany Alemaina sy ny tanàna maro ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina. Io ankehitriny lamasinina haingam-pandeha amin'ny asa isan'ora manome be dia be: ankoatry ny zavatra hafa, sarety amin'ny famerana mari-pana, toerana lehibe mba haninjitra ny tongony, Video efijery sy feo ny rafitra. Hitondra anao any amin'ny faritra alemana ny ICE ary fomba tsara handehanana any amin'ny firenen-kafa, toy ny Aotrisy, Frantsa, ary Soisa.
zana-tsipìka fiarandalamby (fantatra amin'ny anarana hoe Eurostar taloha Italia) manao ny tambajotra maoderina haingam-pandeha, ary izy ireo no italianina ka hiady amin'ny Lamasinina haingana indrindra any Eoropa. Travel amin'ny zana-tsipìka mba hanana fifandraisana haingana ho any am-pon'ny maro toy ny tanàna Italiana Roma, Venice, Florence, Milan, Verona, ary Naples. Misy karazany telo ny Le Frecce fiarandalamby izay marina aminareo ny haingana indrindra azo atao fifandraisana tsy ny tanàna malaza indrindra any Italia fa ny fikasana koa ny tanàna kely ambanivohitra Italiana.
Eurostar eny ambanin'ny ranomasina mpandresy ho an'ny Lamasinina haingana indrindra any Eoropa
Ny Eurostar fiaran-dalamby haingam-pandeha no safidy tsara indrindra ho an'ny dia lavitra avy any London ho Brussels na Paris. Io fiaran-dalamby handray anareo amin'ny Channel Tionelin'i soa mahafaly amin'i London. Travel anaty rano raha mankafy ny fampiononana avy maoderina fiaran-dalamby haingam-pandeha.
Ireo fiarandalamby haingam-pandeha mihazakazaka eo Aotrisy, ny Repoblika Tseky, Alemaina, Hongria, ary Soisa. Railjet fiarandalamby dia toe-of-the-kanto modely izay manome ny fiovana amin'ny Travel traikefa amin'ny alalan'ny fanatitra haingam-pandeha fanompoana amin'ny fampiononana lehibe. Manaitra onboard toerana sy ny asa tsara ny sasany amin'ireo endri-javatra. Haingana hatramin'ny 230 kilaometatra isan'ora no tonga. Ny Railjet mamela anao mandeha mandritra Aotrisy, ary koa ny firenena mpifanolo-bodirindrina toa an'i Alemaina, Soisa, ary Hongria.
Zurich any Vienne Lamasinina
TGV – Moa ny pick ho haingana indrindra Lamasinina In Eoropa
Miasa manerana an'i Frantsa sy any an-dafin'ny, TGV mihazona izao tontolo izao firaketana hafainganam-pandeha ho an'ny mahazatra fiarandalamby. On 3 Aprily 2007, Tonga ny fiaran-dalamby TGV POS 357.2 mph (574.8 km / h), manao izany ny fahadimy lamasinina haingana indrindra any Eoropa. Trainset TGV mihitsy aza tonga 515.3 km / h (320 mph) fitsapana manokana eo ambany toe-javatra ary tsy nanakorontana ny toetr'andro toy ny zavona matevina na hafa.
Train à Grande Vitesse handray anareo amin'ny tantaram-pitiavana fiaran-dalamby nankany any Paris na aiza na aiza eny amin'ny morontsiraka Mediterane raha izany, Mba miangavy re. Mividy ny tapakila sy ny TGV misambotra sarimihetsika izao tontolo izao-malaza ao amin'ny Cannes sy mankafy tanim-boaloboka tsara tarehy ny Loire Valley, rehefa afaka izany,. Add kely traikefa nahafinaritra kokoa ny mitaingina amin'ny alalan'ny fitsidihana tanàna toa an'i Marseille, Lyon, ary Bordeaux.
Montpellier ho any Marseille Lamasinina
Nice an'i Marseille Lamasinina
Paris ho any Marseille Lamasinina
Lyon any Marseille Lamasinina
Ny SJ Zavatra haingam-pandeha dia iray amin'ireo fiarandalamby haingana indrindra any Eoropa dia natao manokana ho an'ny lalana sy ny skandinavianina iray mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandehan'ny hatramin'ny 200 kilaometatra isan'ora. Ireo fiarandalamby manolotra avo lenta ny fampiononana sy hamela anao mba handeha haingana any amin'ny foibe ny tanàna maro toy ny soedoà Stockholm, Göteborg, ary Malmo. Ireo fiarandalamby haingam-pandeha koa ny handeha ho any Copenhagen mivantana (Danemark) amin'ny alalan'ny lalana sy ny lalamby lava indrindra tany Eoropa tetezana, ny mahatalanjona Oresund Tetezana.
Vaovao sy boaloboka amin'ny iray - ny haingana indrindra any Eoropa fiaran-dalamby hanatitra ny iray mety. Mifidiana fiaran-dalamby avy any amin'ny lisitra etsy ambony ary isika no antoka ianao hankafy ny traikefa azonao.
Afaka boky ny fiarandalamby tapakila amin'ny fiarandalamby haingana indrindra any Eoropa amin'ny Vonjeo-A-Train ny saika rehetra nirotsaka toerana ambony ao 3 minitra, ao amin'ny levitra fiaran-dalamby tapakila tahan'ny ary nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/which-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#fasttrains #highspeedtrain fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel
Catch me if you can, and if you can't find me in Save A Train Blog - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Harena miafina In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any By Train